.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် Effect ဆိုဒ်အသစ်များ
Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် Effect ဆိုဒ်အသစ်များ
အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ Flash Song သီချင်းလေးတွေ ဖန်တီးနေတဲ့
သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ ။ အများအားဖြင့် သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီး လိုက်ပြီ ဆိုပါစို့၊
စာသား တွေကသာ ရေးပြီးပေမဲ့ effect တွေထည့် မဲ့အချိန် တွေကျတော့ စိတ်တိုင်းမကျမှုများ
အသစ်အစမ်းရွေး ချယ်မှုများနဲ့ သာ အချိန် တွေကုန်သွားတာတွေ များနေကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်လည်း ကိုယ်တိုင် အဲလိုဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ effect တွေကို အရင်ဆုံး အချိန်ပေးပြီး
ရှာလိုက်ပါတယ် ။ ဆိုဒ်ပေါ် ပြန်ပြီး ရှယ်ယာလုပ်မဲ့အချိန် ကျပြန်တော့ကော်နရှင်က စကားပြောလာရော။
ဒါကြောင့် တိုက်ရိုက် ယူလို.ရအောင်တင်ပေးချင်ပေမဲ့ တင်မရတာနဲ့ပဲ ဒေါင်းလော့ ဆွဲ လို.ရမဲ့ ဆိုဒ်တွေ
ဆီကိုသာ လမ်း ညွှန် လိုက်ပါတယ်။ အခု တင်ပြမဲ့ ဆိုဒ်ကတော့ menu ဘားလေး တွေ
ဖန်တီးချင်တဲ့လူတွေအတွက် swi ဒေါင်းလို.ရမဲ့ဆိုဒ်လေးပါ။
အခုပြန်တင်ပြမဲ့ ဆိုဒ်လေး ကတော့mouse effects, text effects, general eye-candy
ယခု ဖော်ပြပေးမဲ့ဆိုဒ်ကတော့ နဲနဲ စုံပါတယ် နောက်ထပ် အများကြီးကျန်သေးပေမဲ့ တစ်ရက်ကိုနဲနဲပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်လည်း သူရေးထားသလို လိုင်းက မကောင်းတာနဲ့ ပျင်းတာရော ရောသွားပြီးတော့
နမူနာတွေ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ မပြနိုင်တော့ပါ..ကိုယ်တိုင်သာ သွားရောက် လေ့လာပြီး ဒေါင်းယူကြပါရန်..
ဒီပို့စ်လေးကို ဟောဒီနေရာလေးကနေ ကူးယူလာခဲ့တာပါ.. ပုံ : သူရိန်လင်း [မောင်ကော်ပီ]
Flash Song လုပ်တာ ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါဂျာ..........
Posted by Thurainlin at 10:08